LOZAM-PIFAMOIVOIZANA : Anjatony ireo namoy ny aina vokatry ny tandrevaky ny mpamily – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:39
Accueil/Fanadihadiana Manokana/LOZAM-PIFAMOIVOIZANA : Anjatony ireo namoy ny aina vokatry ny tandrevaky ny mpamily
LOZAM-PIFAMOIVOIZANA : Anjatony ireo namoy ny aina vokatry ny tandrevaky ny mpamily
Tafiakatra hatrany amin’ny 171 ireo namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana nandritra iny taona 2020, raha nahatratra 706 ireo naratra. Vokatry ny tsy fitandremana sy ny haratsian’ny piesy ampiasaina amin’ny fiara ary ny faharatsian’ny lalana no tena antony mahatonga ny loza marobe misy eto amintsika. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 29 janvier 2021
Vokatry ny tandrevaky ny mpamily no mahatonga ny loza tahaka izao.
Mampivarahontsana ny antontanisa vokatry ny lozam-pifamoivoizana miseho eto Madagasikara. Raha ny antontanisa avy amin’ny Zandarimariam-pirenena, dia nahatratra 388 ny tranga momba ny lozam-pifamoivoizana, ny taona 2020 lasa teo iny. Nahatratra 171 ireo namoy ny ainy, tamin’ireo tranga ireo, raha tafiakatra hatrany amin’ny 706 ireo naratra. Isan’ireo nahitana tranga be indrindra ny avy eto amin’ny faritanin’Antananarivo, satria 213 amin’ireo tranga 388 dia saika avy eto afovoan-tany avokoa, ary ny ao Antananarivo Atsimondrano no isan’ny maro anisa indrindra. Nanambara ny Tale jeneralin’ny Foibe fitsarana fiarakodia (DGSR), ny Jly Tsirivelo Nicolas fa « vokatry ny tsy fitandremana sy ny tandrevaky ny mpamily no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana maro ». Matetika tsy avy amin’ny tsy fahatomombanana ara-teknika akory fa avy amin’ny kojakojana fiara na piesy ratsy, tonga eto Madagasikara, izay tsy tomombana loatra ». Ny olana, telo volana na andro vitsivitsy izy ireny no miasa dia miteraka tsy fahatomombanan’ny fiara, izay mahatonga loza mahatsiravina. Rehefa miseho ny lozam-piarakodia, dia ambaran’ny mpamily na ny olona manatrika ilay loza, fa resaka fahatapahan’ny hisatra. Saingy, rehefa mandefa manampahaizana manokana ny avy eo anivon’ny Foibe fitsarana fiarakodia, dia hita fa piesy tonga eto amintsika no misy tsy araka ny tokony ho izy.
Antony mahatonga ny loza…
Ny tale jeneralin’ny DGSR mihitsy no midina ifotony manao ny fanentanana.
Ilaina, araka izany, ny fandalinana ny didy aman-dalàna eny amin’ny arabe, isorohana ireo loza mety hitranga, izay toko ny ho fantatry ny mpamily. Navoitran’ny Tale jeneralin’ny Foibe fitsarana fiarakodia, ny Jly Tsirivelo Nicolas fa « rehefa voahajan’ny mpamily ny lalàna, dia mihena ho azy ny resaka, lozam-pifamoivoizana miseholany eny amin’ny arabe. Mazava, araka izany, fa mitoetra ho azy ny tany tan-dalàna ». Ho an’ny eo anivon’ny DGSR, dia manao vaindohan-draharaha ny « familiana ieren-doza » isorohana ny tandrevaka miteraka loza, ka mety hamoizana aina mihitsy. Ankoatra ny zavatra fantatry ny besinimaro, fa rehefa lavitra, ohatra, ny lalana andehanana ka mihoatra ny 400 km. Niangavy mihitsy ny Tale jeneralin’ny Foibe fitsarana fiarakodia, ny amin’ny tokony hanaovana mpamily roa, mba hifandimby, isorohana ny mety harerahana. Nohitsiny, fa isan’ireo mahatonga ny loza miseholany amin’ny resaka lozam-pifamoivoizana, ny fandraisan’ny mpamily zava-pisotro mahamamo na zava-mahadomelina. Tsy tokony hatao latsa-danja ny lafiny resaka torimaso. Ary ny tena goavana, mampitera-doza eny amin’ny arabe, dia ny resaka fandehanana mafy, tsy araka ny tokony ho izy. Matetika miala andraikitra ny mpamily rehefa tonga ny loza, ary mialokaloka hatrany amin’ny tsy fahatomombanana ara-teknika. Ny maro anisa anefa, dia vokatry ny tandrevaky ny mpamily amin’ny lafiny maro.
Efa nandraisana fepetra…
Manatsara hatrany ny fomba fiasa ity ivon-toerana ity ho fitandroana ny aina.
Nambaran’ny Tale jeneralin’ny Foibe fitsarana fiarakodia, fa antony maro no mety mahatonga ny lozam-pifamoivoizana, izay mety amoizana aina mihitsy. « Ankoatra ny fandehanana mafy sy ny tandrevaka tanterahin’ny mpamily, dia eo koa ny faharatsian’ny lalana, izay be lavadavaka sy ny lalana miolikolika. Tokony ho samy mandray ny andraikitra manandrify azy ny tsirairay, ho fitandroana ny ain’ny olom-pirenena », hoy izy nanamafy. Mazava, araka izany, fa tokony hisy fifandraisana avy ny departemana isan-tokony, ho fisorohana ny resaka lozam-pifamoivoizana eny amin’ny arabe io. Ho an’ny eo anivon’ny DGSR, fepetra noraisin’izy ireo ny fanentanana ireo orinasa na sampanasa mampiasa fiarakodia, mba hiroso amin’ny fanofanana tanterahin’izy ireo, isorohana amin’ny loza mitranga. Ity ivon-toerana ity rahateo dia mitana ny tarigetra manao hoe : « Lahy tokana ny aina », ka mila tandrovina fatratra.
FAMORONANA RÔBÔT: Misongadina ny tanora malagasy
FIVAROTANA ZAVA-MAHADOMELINA : 70 kilao ny rongony sarona nandritra ny herinandro
FASAM-BAHINY ANJANAHARY: Razana 78 nalevina eny an-toerana, 16 nymatin’ny Covid-19
Fanadinam-panjakana : Vonona ny fiantsoana amin’ny CEPE, miomana ny kilonga